Anoshanda Mhinduro dzeKufamba neKushanya muPost COVID-19 Era
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » Anoshanda Mhinduro dzeKufamba neKushanya muPost COVID-19 Era
Kuputsa South Korea Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Culinary • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Investments • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
South Korea yaive inzvimbo yekuzvitutumadza yemutambo wepamusoro-soro kuGeneral Assembly yeAmforth yakarongedzwa naPhillipe Francois, Mutungamiri weAmforht uye Ambassador Yo-Shim DHO, Sachigaro SDGs Advocate Alumni.
Pakati pemapaneru pane
Sheika Mai-Bint Mohammed Al Khalifa, Mutungamiri weBahareni Chiremera cheTsika neAntiquities, uye ari kukwikwidza kuve UNWTO Secretary-General.
Gloria Guevara, Mutungamiri uye CEO, World Travel uye Tourism Council.
Elena Kontoura, Nhengo yeParamende yeEuropean uye aimbova Gurukota rezveKushanya, Greece.
Hon. Gurukota Rezvekushanya Edmund Bartlett, Jamaica
Gurukota reJamaica Bartlett akapa zvinotevera zvinongedzo zvekutaura.
• Masikati akanaka.
Nhasi uno kupfuura nakare kose, nyika yave kubatwa zvakanyanya nezviitiko zvemamiriro ekunze zvakanyanyisa, njodzi dzinongoitika dzega, kutyisidzira kwekunze, hugandanga, utsotsi hwepamhepo nedenda.
• Kunetseka uku kwakawedzera nekuda kwekubatana kwe hyper kunoitwa kuburikidza nehukuru hwesimba, kumhanya, uye kusvika kwekufamba. Uye hakuna kumbove nemuenzaniso uri nani wekushupika uku kupfuura kukanganiswa kwe COVID-19.
• Muna Kurume wegore rino apo nhau dzakabuda nezvekuputika kwehutachiona kuChina, vashoma vedu vangadai takafanotaura kuti mwedzi minomwe yakatevera, hutachiwana uhwu hungadai hwakatsvaira pasi rose huve dambudziko rakakomba rehutano hwepasi rose munguva yedu yeupenyu.
Munguva iyi, zvikamu zvese zvehupfumi hwepasi rose zvakaverengerwa sezvo vanhu vepasi rose vakamanikidzwa kuchinjira kune 'zvitsva zvakajairwa' zvekurambidzwa pagungano reruzhinji, matanho ekuparadzanisa magariro, kukiyiwa kwenyika, mazuva ekudzoka kumba, kushanda kubva kumaodha epamba, kugara wega. uye gara kumba maodha.
Mhedzisiro yedenda pakufamba nepasirese nekushanya kwave nenjodzi, sekumanikidzwa nyika zhinji
4) Trigger inonongedza kugadzirisa chiito, icho chinosanganisira chiratidzo chakarongwa munyika iri kudzidza kuchinja nekukurumidza.
• Sekuparadza kwakaita denda iri, chokwadi ndechekuti hazvigone kuve wekupedzisira pahukuru uhu. Rudzi rwekutyisidzira kusanganisira shanduko yemamiriro ekunze uye kukanganisa kwekudziya kwepasirese, hutsotsi hwepamhepo uye hosha uye denda zvinotarisirwa kuramba zvichikonzera matambudziko ekushanya kwepasirese mune ramangwana.
Ndiko kunetseka kweiyi indasitiri yepasirese uye nhoroondo yakaratidza izvi nekukanganisa senge SARS, kuparara kwezvehupfumi hwepasi rose uye 9/11.
Senyaya yekukoshesa, nzvimbo dzepasirese dzinozodikanwa kuti dziteerere nhoroondo kune yekumutsiridza-kuvaka. Chikamu chinoda kuve chinoshanduka, kusimba uye nekukurumidza.
Denda iri ratipa mukana wakasarudzika wekushanya kune zvivakwa zvakasvibirira uye zvine mwero sezviri kufungidzirwa kuti vashanyi vepasi rese vanosarudza nzvimbo "dzakachengetedza" munguva yepashure pecovid.
Nedambudziko kunouya kudiwa kwekuchinja uye kugona.
Nzvimbo dzisingakwanise kuzvigadzirisa patsva kuti dzive nekusimudzira zvakanyanya dzinogona kusiiwa kumashure. Zvimwe zvigadzirwa zvekushanya
zvinoda kuvakwa zvakakomberedza hutano, hutano uye hupfumi hwegirinhi- kusimbisa hunhu nemaitiro akasimba nevose vanobatanidzwa mukushanya kwecheni kubva kuvashanyi kuenda kumahotera uye mamwe mabhizinesi kunharaunda dzenzvimbo.
• Tinofanira kusimudzira zvimiro zvekushanya zvinovimbisa kuti zviwanikwa nemagariro zvakakosheswa nekuchengetedzwa, uye nhaka isingaonekwe yemagariro enharaunda inokurudzira kukura kwehunyanzvi inochengetedzwa.
• Inoda mhando dzekushanya dzakasimba dzinoenderana nenzvimbo, dzinochengetedza raramo uye dzinobatsirwa nenharaunda.
Pfungwa dzekuchengetedzwa kwekuenda uye kukwezva munguva yepasvovha zvichawedzera kusimbisa hutano uye kuchengetedzeka zviyero. Chinyakare laissez faire yekushanya, iyo yakatamba mukuda kwekutarisira-kusununguka kushamwaridzana uye zviitiko, zvichawedzera kuchitsiviwa nemhando nyowani dzekushanya dzinoenzanisa zvido zvehutano nekuchengetedza nemufaro nekutandara.
Kuti tikwanise kuita izvi zvakaenzana, tinotarisira kuona mamwe mahotera, ngarava dzevashanyi, maresitorendi nevashandi vekushanya vachivandudza hutsanana uye nzvimbo dzehutsanana.
• Tinotarisira kuona zvakare kumisikidzwa kwenzvimbo dzeveruzhinji kubvumidza kureba kwemuviri, kuiswa kwezvipingamupinyi uye kufamba uchienda
• Cruise line mapurani anogona kunge anosanganisira ekushisa cheki uye zvekurapa kuongororwa. Vaenzi vanofanirawo kutarisira kuona kakawanda kuchenesa, nhoo dzinopenya, kuwanda kwemaoko, zviyeuchidzo nezve kuregedza uye kugadzirisa zvekare kwema lobbies kuti vagadzire imwe nzvimbo.
• Izvozvi, muno muJamaica, masangano ezvekushanya ari kutungamirwa nema robhoti akasimba eCOVID-19 ayo akagadzirwa mumatanho ekutanga edenda. Ma protocol aya pamwe nekumisikidzwa kwenzira dzakashinga dzakapora, zvakabvumidza runyararo rukuru rwepfungwa uye kuchengetedzeka kune vafambi uye veko zvakafanana.
• Kumhanyisa kwedhijitari kubva padenda iri zvakare kunopa nzvimbo nemukana wekushandisa kugona kwehunyanzvi hwekugadzira zvigadzirwa zvitsva zvekushanya.
• Inokurumidza kudigitalization pamwe neinobuda matekinoroji, senge chaiwo uye akawedzera chaiwo, anogona kugadzira mafomu matsva ezviitiko zvetsika, kufambisa uye mhando nyowani dzebhizinesi dzine mukana wemusika.
• Zvigadzirwa zvakawanda zvevashanyi zvinogona kushambadzirwa kuvashanyi vepasirese nenzira ine hutano, yakachengeteka uye inodhura kusanganisira
• Pasina kusiya nzvimbo dzavari, vashanyi vanozokwanisa kugadzira zviitiko kuburikidza nekushandisa simulators, mahedhifoni, kufambisa uye webcam, kungo taura mashoma.
• Chibvumirano chimwe chiri kubuda ndechekuti kushanya kungangotarisa mukati munguva yepashure pecovid. Izvi zvinoreva kuti dzimwe nzvimbo dzinofanirwa kufamba kuti dziwedzere chikamu chavo chevashanyi vekumba. Izvi hazvizobatsire chete kubatanidza nharaunda nenyika nehunhu hwavo asi zvichakurudzira vazhinji vemuno kuenda kuzororo kwavanogara.
• Iyi inogona kuve zano rinoshanda rekuchengetedza huwandu hwepamusoro hwekugara muhotera kunyanya panguva dzisiri dzepamusoro.
Denda iri ratidzidzisawo kuti tinofanira kuona chikamu chezvekushanya sechiri panguva yakaoma nguva dzose. Izvi zvinoda kuti nyika dzitore nzira yekufambiswa kwegadziriro yedambudziko inoratidza nzira yese yenzanga.
Nechinangwa ichi, nyika dzinofanirwa kucherechedza zvakanyanya kuumbwa kwematanho ekuongororwa kwekukanganisa, mepu yenjodzi uye mishandirapamwe yekudzidzisa veruzhinji.
• Ivo vanofanirwa kusimudzira kudyidzana uye dhizaini dhizaini pamwe neyakaiswa nevazhinji vanoita zvemukati nekunze. Vanofanira
Zviwanikwa zvinofanirwa kupihwa kutsvagurudza, kudzidzisa, kuenzanisa uye zvimwe zvirongwa zvekuvaka kugona. Kugadzirira kwenjodzi uye manejimendi manejimendi inofanirwa zvakare kuenzaniswa uye kumisikidzwa pamatanho ese uye kuyambuka miganhu yedunhu neyekunze.
• Global Tourism Resilience uye Crisis Management Center, iri muno muJamaica, yakagadzwa pahwaro uhu hunobatsira kugadzirira, manejimendi uye kugadzirisa kubva mukukanganisa uye / kana matambudziko anokanganisa kushanya nekutyisidzira hupfumi nehupenyu.
• Mhinduro yayo ichangoburwa padenda repasirese iri kwave kugadzirwa kweJamaica Cares, inova inovhuvhuta vafambi kuchengetedza uye chirongwa che emergency services
• Chirongwa ichi chinopa vashanyi mukana wekutanga wekuchengetedzwa kwevashanyi uye zvekurapa uye zvekupindura dambudziko zviitiko kusvika kusvika kunjodzi dzinongoitika dzoga.
• Aya ndiwo marudzi ehunyanzvi uye mhinduro dzekushambadzira idzo dzinozoda kushanyirwa kuve nechokwadi chekushanda nekusimba kwepashure pecovid-19 nekupfuura.
• Iyi foramu ichatipa mukana wekuti tikurukure mune zvakadzama, izvi nedzimwe mhinduro dzinosimbisa kushanya kwenyika dzese munguva yepashure pehurongwa.